Miankina amin’ny solosaina enti-tanana lafovidy ny aterineto maimaim-poana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2018 3:45 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Aogositra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Araka ny nomarihan'i Rezwan tamin'ny volana Mey 2009, notolorana ny “Vatsy ho an'ny Mpikatroka Iraisam-pirenena” mba hanatrehany ny Fivoriambe BlogHer tany Chicago i Cristina Quisbert avy ao amin'ny tetikasa famatsiam-bola Rising Voices Voces Bolivianas. Niaraka tamin'i Cristina i Pilirani Semu-Banda avy any Malawi, Oluwatoyin Ajao avy any Nizeria, ary Annie Zaidi avy any India.
Cristina Quisbert tao El Alto, Bolivia
Tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Espaniola dia nanazava ny antony tsy nahafahany nandefa lahatsoratra betsaka raha mbola tany Chicago i Cristina :
Mbola aty Chicago aho manatrika ny Fivoriambe BlogHer. Sambany aho no teto, ary maro ny zava-baovao tamiko. Ho fitantarana fohifohy dia marihiko fa manana fidirana amin'ny aterineto maimaim-poana any amin'ny efitrano fatoriana ny hotely iray manontolo. Milaza ny zava-drehetra izany: misy ny fidirana haingana sy maimaim-poana amin'ny aterineto. Saingy ho ahy kosa dia ny mifanohitra tanteraka no nisy nandritra izany satria tsy manana solosaina enti-tanana aho. Noho izany dia tao amin'ny trano fisakafoanana kely tao amin'ilay hotely izay misy [ahitana] aterineto maimaim-poana rehefa mividy zavatra aho no nanoratra . Miaraka amin'ny tenimiafina ny fidirana amin'izany ary voafetra ny habetsahan'ny fotoana ahafahanao miditra amin'ny aterineto. Tsy nety ny tenimiafina izay tokony nampiasaina, ka tsy maintsy nindrana ny an'ny olon-kafa aho noho izany mba ho ampiasaiko.
Nampahatsiahy antsika ny lahatsoratr'i Cristina fa tsy mbola manome antoka ny fidirana amin'ny aterineto malalaka ny fidirana amin'ny aterineto maimaim-poana raha tsy mividy solosaina lafovidy. Soa ihany fa milatsaka isam-bolana ny vidin'ilay antsoina hoe netbooks, saingy mbola miankina amin'ny solosain'ny birao, cybercafe, na tranombokim-panjakana ny ankamaroan'ny bilaogera any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana mba handraisana anjara antserasera.
Noho ny Twitter dia nahafantatra isika fa tonga soa aman-tsara tany Bolivia i Cristina. Nahomby ny fanatrehany ny fivoriana tany amin'ny BlogHer. Araka ny nosoratan'i Barb avy ao amin'ny The Middle Way hoe :
Nihaona tamin'i Cristina Quisbert avy any Bolivia aho tamin'ny fotoan'ny fisakafoanana ny Zoma, izay nanova ny eritreritro momba ny fandaharam-potoanako ny Asabotsy. Tena faly aho nanatrika ny fivorian'ny mpikatroka iraisam-pirenena! Nampahatsiahy ahy ireo vehivavy ireo fa mety mihoatra noho ny fanehoan-kevitra manokana ny famahanana bilaogy – afaka manampy tokoa amin'ny fanovana izao tontolo izao izany.
Niaiky i Rock and Roll Mama, na dia kivy aza izy nahita ireo mpandray anjara tamin'ny BlogHer nisafidy fa tsy nanatrika ny fivoriana tamin'ny fametrahana marika, fosafosa ary ny haivarotra. Nanoratra i Wrong Shoes fa tsy dia nahagaga loatra azy intsony ny fotoam-pivoriana, ary nitaraina ny toa an-dry expateek fa maro ny mpandray anjara tamin'ny BlogHer no liana kokoa tamin'i Britney Spears.
Ho an'i Cristina kosa dia nanohy ny fanoratany mahavariana izy. Namoaka ny tantara lalindalina kokoa momba ny mahazo ireo mponina indizeny any Bolivia izy tao amin'ny World Pulse. Indro ny santionany:
Tamin'ny fotoana farany nandehanako tany Santa Cruz dia nisy lehilahy iray niantsoantso mafy hoe “Indiana, mandehana mivoaka!”. Tsy nanao na inona na inona izay mety ho nanelingelina olona aho. Fa ny maha-vehivavy indizena ahy dia ampy ho an'io lehilahy io mba hanaovana ahy toy izany. Na izany aza, manadino ireo manampahefana sy ireo olona sasany izay miantso ny vahoaka indizeny ho toy ny firazanana ratsy na mampiasa teny maneso hafa, fa milaza ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona ao amin'ny andininy faha 13 fa “Manana zo malalaka hivezivezy sy hisafidy ny fonenany ao anatin'ny faritanin'ny Fanjakana iray ny olona “. Izany no ohatra iray tamin'ny fihetsiky ny olona sasany. Ho an'ny Boliviana kosa, heveriko fa zava-dehibe ny mijery any aoriana mba hahitana hoe avy aiza no hiavian'izy ireny.